Sida La Isku Diiwaangaliyo Boston Public Schools Inta Lagu Jiro COVID-19 | Boston Finder Finder
Sida la iskaga qoro Dugsiyada Dadwaynaha ee Boston inta Lagu jiro COVID-19
Diiwaan gelinta Boston Public Schools waxay bilaabanaysaa Isniinta, Janaayo. 5, 2021. Maadaama uu socdo cudurka faafa ee korona fayras, qaybo ka mid ah hawsha diiwaangelinta ayaa u muuqda waxoogaa ka duwan sannadkan. Intaan ayaad u baahan tahay inaad ogaato si aad ugu diiwaangeliso ilmahaaga wakhtiga loogu talagalay.
Nidaamka diiwaangelinta dugsiyada BPS wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo muhiim ah: kala-sarreynta dugsiyadaaga iyo hubinta degganaanshahaaga Magaalada Boston. Waqtigaan la joogo, dhammaan Xarumaha Soo-dhaweynta BPS si ku-meel-gaar ah ayey u xiran yihiin aafada awgeed, sidaa darteed waraaqaha iyo geeddi-socodka aad shaqsi ahaan ugu qaban lahayd Xarunta Soo-dhaweynta waxaa lagu dhammaystiri karaa khadka tooska ah iyo telefoonka.
Guji halkaan si aad u aragto muuqaal ku baxaaya Isbaanish.
1. Ogow taariikhaha Diiwaangelinta Mudnaanta leh ee ilmahaaga.
BPS waxay fuliyaan laba wareeg oo diiwaangelinta mudnaanta leh. Wareega koowaad ee diiwaangelinta mudnaanta waxay dhacdaa laga bilaabo Talaadada, Janaayo 5, ilaa Jimcada, Janaayo 29, 2021 ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6, 7, iyo 9 bisha Sebteembar 2021.
Wareegga labaad ee diiwaan gelinta mudnaanta leh ayaa dhacaysa Isniinta, Febraayo 8 ilaa Isniin, Abriil 5, 2021 ardayda galaaya dhammaan fasalada kale bisha Sebteembar 2021: gaar ahaana, fasalada K2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, iyo 12.
TALO: Ma hubtid nooca fasalka K ee khuseysa ilmahaaga? Fasaladaan heerka K waxaa lagu jaangooyaa da'da, sida ku cad qaacidada soo socota: Haddii cunugaagu gaari doono da'da _____ bisha Sebteembar. 1, 2021, Wuxuu xaq u leeyahay inay galo fasalka ____.
2. Ururi dukumiintiyadaada deganaanshahaaga.
BPS ayaa u baahan wadarta guud 5 dukumiinti oo keli-keli ah si loo xaqiijiyo daganaanshaha cunugaaga ee Magaalada Boston, laakiin dukumiintiyadaan waa inay buuxshaan shuruudo gaar ah, laga bilaabo noocyada dukumiintiyada la aqbali karo ilaa taariikhaha marka dukumiintiyadaan lasoo saaray.
Maadaama ay si ku-meel-gaar ah u xirmayso dhammaan Xarumihii Soo-dhaweynta ee BPS, waxaad ku buuxin doontaa dukumiintiyadan khadka tooska ah, sidaa darteed way ku caawinaysaa inaad soo ururiso wax kasta oo aad u baahan tahay ka hor intaadan billaabin diiwaangelintaada.
Halkaan waxaad ka helaysaa liiska dukumiintiyada daganaanshaha ee daruuri ah oo aad u baahan tahay si aad u dhammaystirto diiwaangelintaada. Dukumiintiyadaan qasab u ah Liiska Diiwaangelinta ee BPS ayaa laga heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Haitian Creole, Cabo Verdean, Vietnamese, Shinees, Bortugiiska, Faransiis, Carabi, iyo af Soomaali marrinkan kore.
TALO: Haddii aadan sharciyeysnayn ama aadan haysan cinwaan rasmi ah, ilmahaagu wuxuu weli xaq u leeyahay waxbarasho lacag la'aan ah, ee dadweynaha ee laga helo Boston Public Schools. Akhriso Su'aalaheena ee Inta badan La-isweydiyaa si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan duruufahan gaarka ah.
3. Isku diiwaangeli BPS oo dugsiyaadaada u qiimeey qaab oonleen ah.
Nidaamka diiwaangelinta hordhaca ah waxa uu kuu ogolaanayaa inaad dhameystirtid dukumeentiyada oonleenka ee diiwaangelintaada BPS, sida buuxinta warbixinta cunugaaga iyo qiimeeynta dugsiyadaada. Weli waxaad u baahan tahay inaad ku wacdo taleefan oo aad la hadasho Khabiirka Isdiiwaangelinta Xarunta Soo-dhaweynta si aad u dhammaystirto nidaamka diiwaangelinta dugsiga, xitaa haddii aad horay isu-diiwaangeliso.
Diiwaangelinta hore xitaa waa la dhameystiri karaa isla maalinta ka hor inta aadan la hadlin Khabiirka Isdiiwaangelinta ee Xarunta Soo-dhaweynta.
TALO: Ma u baahan tahay caawimaad go'aan ka gaarista sida loo qiimeeyo dugsiyadaada? Hagaheena Great-Fit School ayaa ku caawin kara.
4. Qaab oonleen ah u qabso ballantaada Xarunta Soo-Dhawaynta Wicitaan ahaan ah si aad u dhamaystirto diiwaangelintaada.
Si aad u dhammaystirto nidaamka diiwaangelinta, waxaad kula hadli kartaa Khabiirka Isdiiwaangelinta Xarunta Soo-dhawaynta telefoon ahaan. Marka la samaynayo Isdiiwaangelinta Khabiirka ee Xarunta Soo-Dhaweynta wicitaanka telefoonka looma baahna, waxaan qoysas ku talinaa inay qabsadaan ballanta ugu habboon jadwalkooda.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad jadwal u sameyn kartaa inaad kula hadasho Khabiirka Isqorista ee luqadaada hooyo. Wicitaannada Xarunta soo dhawaynta ayaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, Haitian Creole, Cabo Verdean, Vietnamese, Shinees, Bortugiiska, Faransiis, iyo Soomaali.
TIP: Halkan ku qabso ballantaada Xarunta Soo dhawaynta oonleen ahaan.
Si aad wax badan uga ogaato sida ilmahaaga loogu diiwaangaliyo dugsiga Boston, booqo Qalabkeena Diiwaangelinta Dugsiga halkan.